Thor Schrock: Internet Millionaire Xiga? | Martech Zone
Axad, Juun 24, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Blogging saaxiib, Thor Schrock, ayaa ku jira orodka loogu jiro Milyaneerka xiga ee Internetka!
Thor ayaa si dhakhso leh ugu noqotay kheyraad weyn tikniyoolajiyadda. Waxaan u maleynayaa in mid ka mid ah sababaha aan u jeclahay Thor iyo boggiisa aadka u badan ay tahay inuu yahay mid dagaal badan oo ku saabsan kor u qaadista laakiin is-hoosaysiinta iyo saaxiibtinimada habka uu sidaas sameeyo. Isagu mar ayuu ii soo diri doonaa emayl mar - laakiin had iyo jeer waa shakhsi, fikir iyo raalli ahaansho akhris.
Thor ayaa maanta i qoray oo wuxuu u baahan yahay kaalmadaada si aad uga dhigto Milyaneerka Internetka ee xiga! Waxaan rumeysanahay in socodkiisa iyo xamaasadiisa ay halkaas ku sii wadi doonaan haddii tartan jiro iyo haddii kale.
Codbixinta Thor Schrock, Milyaneerka Internetka ee soo socda! Hubso inaad kudarto Blog-ga Thor akhristahaaga sidoo kale! Aniga ahaan, waxaan ku faraxsanaan lahaa uun inaan noqdo Internet-ka soo socda boqol-thousandaire.
Waxaan ahay YouTubotato
Aad baad ugu mahadsantahay qoritaanka iyo ammaanta Doug! Micno weyn bay ila leedahay aniga waxbadan ayaan ka bartay bartaada sanadkii la soo dhaafay.
La socodsii haddii ay jiraan wax kasta oo aan kuu qaban karo!
waxaan kuu rajeynayaa nasiib wacan.
Jun 26, 2007 saacadu markay ahayd 8:25 AM
Markii hore aniga sidoo kale waxaan waday in aan maamulo Internet Milyaneerka xiga laakiin waxaan go'aansaday in aan Billionaire tago halkii !!
Sida qofkasta oo kale oo la yimaada fikrad Milyan ama Bilyan Dollar waxay had iyo jeer umuuqataa inay Qaadanayso Lacag si ay udhacdo! Hal fikrad oo aan sameeyay waxay ahayd: Flash Slideshows ayaa midho dhal u noqotay co kale. taas oo isla markiiba laga iibsaday MySpace $ 10 ama $ 20 Milyan oo Doolar - markaa way dhici kartaa! Weli waxaan jecelahay inaan fikirkayga ka saaro albaabka mar haddii la ansaxiyey + tartamayaasha sida Yahoo! ama Google ama Microsoft (dadka runta jari kara jeegga !!;)) Waa inay daneeyaan *
Xaqiiqdi waan hubin doonaa Thor's Blog!
Farxad !! Billy;))
Milyaneerka xiga ee Internetka
Qof kastaa wuxuu u baahan yahay inuu u codeeyo Thor. Waa nin aad u wanaagsan wuxuuna wareysi aad u qurux badan siiyay barnaamijkeyga 'Next Internet Millionaire Big Action Podcast'.
Xaqiiqdi iska hubi oo qiimee video-ga Thor ee a 10. Waa nin weyn oo ficil weyn qaada isagoon jackass ahayn!